Kenya oo xabsi u taxabatay in ka badan toban qof oo Soomaali ah - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Kenya oo xabsi u taxabatay in ka badan toban qof oo Soomaali...
Booliska gobolka Garissa ee Kenya ayaa Sabtida maanta ah gacanta ku dhigay, baaritaanna ku bilaabay 12 qof oo Soomaali ah, sidda uu baahiyey telefishinka maxaliga ah ee Citizen Tv.
“Saraakiisha kadib waxay ogaadeen in aqoonsiga la siiyey uu ka duwan yahay midka gaariga dhabta ah, waxay kaloo ogaadeen in gaariga uu ka diiwaan-gishan yahay Wasaarada Horumarinta Magaalooyinka Garissa,” ayuu baahiyey Tv-ga oo soo xiganaya illo wareedyo dhanka amniga ah.
Kenya ayaa kamid ah wadamada caalamka oo ay ku badan yihiin kiisaska dhoofinta dadweynaha. Mas’uuliyiinta waxay mar walba sheegaan in ay wax ka qabanayaan, haddana way isa soo tarayaan dambiyadan.
Previous article(Daawo) Yeey ahayd in uu codsigaan udiro Baarlabaanka?
Next articleCiidamo ka tirsan Puntland oo tababar loo soo xiray